सुन्दरी ‘राजकुमारी’ पूर्णिका शाहका यी सुन्दर पक्ष ! छोरीसंगै हिमानी शाह (भिडियो र फोटो फिचर) – Rapti Khabar
चुपचापको अर्थ जस्ले जसो लाएँ पनि
दिलको मौनता केवल ओभानो ओठले बुझेको छ।
झरेको आँशु जस्ले जसो ठानें पनि
नानीको संनाटा केवल रसिलो परेलाले बुझेको छ।
जीवनको खुशी जस्ले जसो भनेँ पनि
छातिको हांसो केवल नथाम्ने धड्कनले बुझेको छ।
शरदको रात जस्ले जसो देखेँ पनि
हिस्सी चॉदनी केवल सहने हृदयले बुझेको छ।
झुकेको फूललाई जस्ले जसो थामेँ पनि
मुटुको घॉऊ केवल बिझ्ने काडाले बुझेको छ।
जीवनको बाटो जस्ले जसो ठानेँ पनि
बॉच्नुको अर्थ केवल राष्ट्रको मायाले बुझेको छ।
केही समयअघि देखि चर्चित बनिरहेको ‘राजकुमारी’ पूर्णिका शाहले फेसबुकमा शेयर गरेकी हुन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी नातिनी अर्थात पूर्वयुवराज पारस शाहकी जेठी छोरी पूर्णिकाको चर्चा सामाजिक सञ्जाल मार्फत चुलिँदै गएको छ ।
अचेल खासगरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनको सक्रियता निकै छ । उनलाई फेसबुकमा करिव ११ हजार जनाले लाइक गरेका छन् भने ११ हजार एक सय २५ जनाले फलो गरेकाछन् । उनी चर्चामा आउनुका पछाडि मुख्यतः ३ वटा कारण छन् ।
यसरि खुल्दैछ दरबार
आफ्ना सामाजिक काम र अतितसहित राजसंस्थाका पारिवारिक सदस्य वैचारिक रूपमा पनि खुल्न थालेका छन् ।
यहि क्रममा आइतबार पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह छोरी पूर्णिकासहित हिमानी ट्रष्टको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भइन् ।
सो क्रममा कोषका सल्लाहकार तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जन्मोत्सवमा अवसरमा यसै महिना प्रकाशनमा ल्याएको संदेश संग्रहको औपचारिक विमोचन गर्दै हिमानीले सो पुस्तकको रकम समाज सेवामा लगाउने घोषणा गरिन् ।
कोषले प्राप्त गरेको ५०० प्रति पुस्तक विक्रिबाट उठेको रकम दैवी प्रकोप कोष स्थापना गरी उद्दारका लागि खर्च गरिने हिमानीले बताइन् ।
हर्षित मुद्रामा देखिएकी हिमानीले भनिन्,‘अब दैवी प्रकोप उद्दार कोष खडा गरी ट्रष्टले अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछ ।’
उक्त पुस्तकमा आफू राजा भएपछि ०६३ सालसम्म सरकारी, औपचारिक र अनौपचारिक हिसाबमा गरेका निर्णयलगायत कतिपय घटना क्रमलाई पूर्वराजाले संग्रहका रुपमा उतारेका छन् ।
काठमाडौं । यसै साता चीन भ्रमणमा निस्कन लागेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको ट्रान्जिट सिंगापुरमा हुने विषयले नेपाली राजनीति तातेको छ ।
बुहारी तथा पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह, परिवारका केही सदस्य र सहयोगीसहित चीन निस्कन लागेका पूर्वराजाको ट्रान्जिट त्यहाँ हुने जनाइएको छ । केही समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगापुरको आराम भ्रमण तथा परिवारसहित युएई पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणसँग जोडेर पूर्वराजाको ट्रान्जिटलाई हेरिएको छ ।
निर्मलनिवास स्रोतले भने भ्रमण हुन सक्ने बताए पनि यसको औपचारिक जानकारी दिएको छैन । स्रोतले भन्यो,‘भ्रमण हुने कुराकानी चलेको छ, तयारी र तालिकाबारे खुलेको छैन ।’
सकभर यो भ्रमणलाई निर्मलनिवासले गोप्य राख्न चाहेको छ । केही समयअघि मात्र एक महिना भन्दा लामो थाइल्यान्ड भ्रमण सकेर पूर्वराजा परिवारसहित नेपाल फर्किएका थिए ।
‘यी अनौपचारिक भ्रमण भए पनि एकअर्कासँग जोडिन सक्ने आधार हुन सक्छन्, जसलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न’, एक जना राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्,‘कुनै विदेशी शक्तिको संयोजनमा यस्तो संयोग हुन सक्छ ।’
हालै मात्र भारतीय गुप्तचर संस्था रअ प्रमूख सामन्त गोयल नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र पूर्वराजासँग पनि गोप्य भेट गरेको भन्ने चर्चा थियो । यसैको राजनीतिक तरङ्गका रूपमा यी हाईप्रोफाइल अनौपचारिक भ्रमण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
तर, गोयलसँगको भेट भएको भन्नेबारे पूर्वराजाको सचिवालयले खण्डन गरेको थियो । उनका प्रेस सहयोगी डा. फणिन्द्र पाठकले त्यस्तो कुनै भेट नभएको बताएका थिए ।
सिंगापुर भ्रमण किन शंकामा पर्छ ?
तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालाको उपचारका क्रममा सिंगापुरमा प्रचण्डसँग भेट भएको थियो । उक्त भेट सकी प्रचण्ड नेपाल फर्किनासाथ तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनु परेको थियो ।
कोइरालाले प्रचण्डलाई सिंगापुरमा नै राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ गर्ने र जिम्मा लिनका लागि आग्रह गरेको बेलामौका प्रचण्डले नै भन्ने गरेका छन् । कतिपयले तत्कालिन भारतीय प्रशासनले नै नेपालको राजीनामा गराउने विषयमा गोप्य बैठक गरेको थियो ।
यसै कारण पनि हाइप्रोफाइल भ्रमण वा ट्रान्जिटलाई सशंकित दृष्टिबाट हेर्ने गरिएको छ ।
किन दिए प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रलाइ चेतावनी?
काठमाडौँ, १९ साउन । नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नागार्जुनबाट निकाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
गणतन्त्र स्थापनाका क्रममा शरण पर्न आएकाले ज्ञानेन्द्रलाई संरक्षण दिएको भन्दै बकबक गरिरहे जनताले नागार्जुबाट निकाल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
वीपीमार्गलाई रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका जोड्न सुनकोशी नदीमाथि खैरेनी घाटमा बनेको पक्की पुलको उद्घाटन गर्नत्यहाँ पुगेका प्रचण्डले राजा माहाराजाका केही दासहरुले सरकार मात्र होइन, व्यवस्था नै फेर्ने बकबक गरिरहेको आरोप समेत लगाए ।
प्रचण्डले जनताको त्याग र बलिदानले ल्याएको व्यवस्थाको सम्मान गरी अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे । हिजझ मात्रै एक कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सरकार होइन, व्यवस्था नै फेर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रचण्डले यसैको जवाफ दिएका हुन् ।
‘पपुलिष्ट’ बन्ने ध्याउन्नमा मात्रै मन्त्री बिना मगर !
काठमाडौं, १९ साउन । पदीय जिम्मेबारी लिएको डेढ बर्ष बित्दा पनि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मन्त्री बिना मगरले ठूलो परियोजना र मन्त्रालयका काममा ‘माखो’ मार्न नसकेको आरोप लागेको छ ।
मन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमा नै मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणस्थलको निरिक्षण गरी सोही बर्ष पानी आउने घोषणा गरी ‘पपुलिष्ट’ बाटोमा हिँडेकी मगर एटीएमबाट पानी, खाडीलगायतका मुलुकमा पानी निर्यात गर्ने जस्ता ‘पपुलर’ एजेन्डा घोषणामा लागिन् तर केही काम गरिनन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य ठेकेदारले काम छाडी भाग्न बाध्य पारियो भने नयाँ ठेक्काको काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालका लागि कतारका राजदूतलाई भेटी पानी निर्यात गर्ने विषयमा कुराकानी भयो तर प्रगतिको काम एक रती पनि बढाउन नसकेकी मन्त्री मगरले हालै मात्र एउटा निजी पानी कम्पनीको कार्यक्रममा फेरि भनिन्,‘हिमशृंखला र हिमनदीबाट खेर गइरहेको पानीलाई विदेशमा निर्यात गरिछाडिने छ ।’
हालै मात्र सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयको कार्यप्रगतिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूसँग करारको सम्झौता गरेका छन् । यसमा मन्त्री मगरले पनि सम्झौता गरेकी छन् । तर उनी काम भन्दा बढी आयोजनालाई असर गर्न उद्दत विभिन्न पानी कम्पनीका मालिकको कार्यक्रममा मात्र व्यस्त हुने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
करिब ९७ प्रतिशत काम सकेको मेलम्चीको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दि रिभेन्नाले ठेक्का तोड्दा पनि उनी विवादमा आएकी थिइन् । ठेक्का तोड्ने बेलाका तत्कालिन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले मन्त्री मगरले राष्ट्रियता नै खतरामा पारेको भन्ने आरोप लगाएका थिए, जसलाई उनले मन्त्रालयबाट नै स्थानान्तरण गरेकी थिइन् ।
मन्त्री मगरले बिहीबार ‘नेसनल एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री प्रालि’ले नेदरल्यान्ड्सबाट ल्याएको प्रेसरबाट पानी तान्ने प्रविधिको ललितपुरको गोदावरी र ठैबमा परीक्षण गरेकी थिइन् । शुक्रबार उनी रसुवाको पानी विदेश निर्यात गर्ने निजी कम्पनीको प्रवद्र्धनको कार्यक्रममा पुगिन् ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अहिले मेलम्चीका विषयमा मन्त्री मगर चिन्तित छैनन् । बरु, नेकपाको नजिक रहेका कतिपय पानी कम्पनीका मालिकले बोलाएको औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रमका लागि समय निकाल्छिन् । गौतम महर्जनको लगानीमा खुलेको नेसनल एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री प्रालिले पहाडी क्षेत्रमा प्रेसरको माध्यमबाट पानी तान्न सक्ने प्रविधि ल्याएको दाबी गरेको छ ।
उक्त प्रविधिले नीजि कम्पनीलाई फाइदा हुनेछ । उसले प्रबद्र्धन गरेको पानी सर्वसाधारणलाई महँगो मुल्यमा विक्रि वितरण गर्नेछ जबकि, मेलम्ची समयमा आउँदा यस्ता कम्पनीको साख नै नरहने अवस्था हुन्छ । एक अधिकारी भन्छन्,‘यस्ता कम्पनीलाई निरुत्साहीत गर्नका लागि समयमा मेलम्ची ल्याउनुपर्ने हो, तर मन्त्री नै प्रमूख अतिथि भएर यस्ता कार्यक्रममा पुगेपछि मेलम्ची रोक्ने खेलमा त होइन भन्ने आशंकालाई बल पुग्छ ।’
त्यसो त प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समिति र संसदमा पनि मन्त्री मगरले बोलेको मात्र मेलम्चीका विषयमा कार्यप्रगति नगरेको भनी बारम्बार प्रश्नको सामना गर्नु परेको थियो । यति हुँदा पनि मन्त्री मगरले काम गर्नुको साटो ‘पपुलिष्ट’ बाटो मात्र रोजेको आरोप लाग्दै आएको छ ।